प्रहरीकै संरक्षणमा रहेका ७ जना बालक हराए ! | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more प्रहरीकै संरक्षणमा रहेका ७ जना बालक हराए !
प्रहरीकै संरक्षणमा रहेका ७ जना बालक हराए !
पुस १९ गते, २०७४ - १३:२३
दाङ । दाङमा प्रहरीको संरक्षणमा रहेका ७ जना सडक बालकहरु प्रहरी निदाएको मौका छोपी भागेका छन् । घोराही बजारमा एक डेढ बर्ष देखी रहेका सडक बालकहरुलाई केही दिन पहिले प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर जिल्ला समन्वय समितिको परिसरमा रहेको भवनमा राखेको थियो ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट हिजो अल्पकालिनरुपमा समन्वय समितिको परिसरमा रहेको भवनमा राखेका सडक बालकहरु गएराती नै प्रहरी निदाएको मौका छोपी भागेका हुन् । ७ जना मध्य दुई जना दिउसै छतबाट हाम फालेर भागेकाे र अन्य ५ जना भने राती प्रहरी निदायको मौका छोपी भागेका हुन् ।
उनिहरुको संरक्षण र सुरक्षाका लागि दाङका प्रहरी प्रमुख एसपी दुर्गा सिंहले २ जना प्रहरीलाई खटाएका थिए । तर सोमबार राती १२ बजेपछि प्रहरी निदायको मौकाछोपी उनिहरु भाग्न सफल भएका हुन् । प्रहरी बिहान पख निद्राबाट ब्यूझदा बालकहरु भागी सकेका थिए ।
मुख्य ढोकामै सुतेका प्रहरीलाई छक्काएर उनिहरु अर्को ढोकाबाट भाग्नलाई दिउसो भागेका बालकहरुले बाहिरबाट ढोका खोल्न सघाएको देखिएको एसपी सिंहको भनाई छ । बजारका पसलहरुमा चोरी बढेपछि प्रहरीको अनुन्धानबाट उनिहरुलाई चोरी गरेका समान र ताला फोड्न प्रयोग हुने फलामका सरीया सहित पक्राउ गरिएको थियो ।
पुस १९ गते, २०७४ - १३:२३ मा प्रकाशित